Lightning Dice Dib u eegis 2021 | Evolution Gaming | Voordeelcasino.com
Bogga ugu weyn » Ciyaaraha casino ee bilaashka ah » Lightning Dice
Ciyaar Lightning Dice
Lightning Dice dib u eegis 2021
Xaqiiqdii waxaa loogu yeeri karaa ciyaar aad u gaar ah. Lightning dice waa ciyaar laadhuu fudud. Cunsur caan ah ayaa ah 'Hillaaca' ku darista ciyaartan. Waxaan horay u aragnay tan Lightning roulette kala duwan Halka ay dhowr diyaaradood oo dheeri ah ay ku soo dhacdo biriq iyo ku dhufashada tirooyinkaas ay sii kordhayaan xitaa marka ay dhacaan. Kulankaan waxaa lagu ciyaari karaa dhammaan casinos online dhin Evolution sida qeybiyaha ah Khamaarka tooska ah hebben.
At Lightning Dice tani wax badan uma shaqeyso. Waa ciyaar laadhuu oo adeegsata saddex laadhuu. Dhagaxaan waxaad ku tuuri kartaa ugu yaraan 3 iyo ugu badnaan 18 indhood. Dhagaxan si indha la’aan ah looguma tuuro loox ama goob. Waxay gaari doonaan saldhiga ugu dambeeya iyaga oo maraya waddo la moodo plexiglass. Intii lagu gudajiray, dhagxaanta waxay lakulmidoonaan carqalado kaladuwan sidaa darteedna way boodayaan oo si aad ah ayey u jeedinayaan Kooxda martida loo yahay ayaa ka wada hadli doonta wax walboo dhan, laaluushka waxaad dib ugu celineysaa masraxa meesha ay ka dhici doonaan.
Cunsurka ugu weyn 'Hillaaca' sidoo kale waxaa kicinaya martida loo yahay. Tan, tirooyinka u dhexeeya 3 iyo 18 qaar baa hillaaca ku dhici doona. Marka nambarka korontada laga soo saaro danab, waxay soo saari kartaa xitaa faa iido dheeri ah. Tani waxay ku kala duwanaan doontaa lambar kasta. Nambarada ugu hooseeya waxay soo saari karaan 1000 jeer saamigaaga. Nasiib darrose, tani ma ahaan doonto kiiska lambarada dhaca inta badan. Xaqiiq ahaan waxaad kaliya heleysaa 10 jeer sharadkaaga 11 iyo 5. Marka ay ku dhacdo biriq, tani waxay aadi kartaa ilaa 10 ama 15 jeer.
Dhammaan waxay leeyihiin naqshad isku mid ah sida Roulette kala duwan Madow oo leh khadad dahab ah oo nadiif ah. Waxay aad ugu egtahay 'Gatsby-kii weynaa' oo laga soo gudbaa Evolution Gaming sidoo kale loo yaqaan bay'ad Art-Deco.
Cayaartu waxay siisaa layaab farxad leh wixii jira dalab ka Evolution Gaming higgaad. Aad bay u fiicantahay in la ciyaaro in cabbaar ah. Maaddaama aad ka ciyaari kartid ciyaartan 20 senti, waxaad sidoo kale u ciyaari kartaa tan muddo dheer adigoon sameynin wax khasaaro badan ama macaash badan. Sidoo kale ciyaaryahanka waxyar qarash gareeya, tani waa hab bixiya madadaalo badan. Laakiin sidoo kale waxaad ku sharxi kartaa € 500 halkii wareegba khamaarayaasha waaweyn ee doonaya inay u socdaan. Qaaciddada danabku waxay sidoo kale umuuqataa inay sifiican uga shaqeysay ciyaartan. Ku guuleystahayaga buuxda ee taxanaha hillaaca ayaa ah Lightning Roulette duwanaansho.
In ka badan Lightning Dice
Midkani Lightning Dice dib u eegista waxaa qoray Sam waxaana markii ugu dambeysay la baaray 29-04-2021.